Ingabe kufanele ufunde ukuze ube umphathi | Ukwakheka kanye nezifundo
Yini okufanele uyifunde ukuze ube yi-stewardess
UMaria Jose Roldan | 26/12/2021 12:44 | Kubuyekezwe ku- 26/12/2021 12:45 | Ukuphuma Komsebenzi
Umsebenzi wokusingatha umcimbi unezinzuzo eziningi ngaphezu kokuba iphupho labesifazane abaningi bakuleli. Umninikhaya unenhlanhla yokuhamba mahhala futhi avakashele amazwe amaningi emhlabeni jikelele. Nokho, umsebenzi ofaneleke ngokwanele ngoba udinga, phakathi kwezinye izinto, ukuphathwa kahle nabagibeli kanye nokwazi ukuthi kwenziwa kanjani ezimeni ezahlukene ezingase zenzeke phakathi nendiza.
Esihlokweni esilandelayo sizokutshela yini okufanele uyifunde ukuze ukwazi ukufisa umsebenzi wokuba istewardess.
1 Yiziphi izidingo ezidingekayo ukuze ube umphathi
2 Izinzuzo kanye nokubi kokuba umphathi
Yiziphi izidingo ezidingekayo ukuze ube umphathi
Imfuneko yokuqala lapho usebenza njengesisebenzi endizeni ukuthi ube neminyaka eyi-18. Kunezinkampani ezisungula ubuncane beminyaka yobudala engama-21. Mayelana nomkhawulo weminyaka yobudala, okwamanje ineminyaka engama-35 ubudala.
Ubude bungenye yezidingo ezifunwa yizinkampani zendiza uma ziqasha isisebenzi endizeni. Le mfuneko ibaluleke kakhulu njengoba abasingathi kufanele bafinyelele impahla yezimo eziphuthumayo ngaphandle kwenkinga uma idingeka. Njengamanje, isisebenzi sasendizeni sidingeka okungenani sibe ngu-1,57 cm ubude.
Endabeni yezifundo nokuqeqeshwa okudingekayo, iningi lezinkampani zendiza zidinga ukuthi isikhundla somphathi, sibe nesitifiketi esisemthethweni se-TCP futhi okungenani sibe ne-ESO. I-TCP ingatholwa kunoma yisiphi isikhungo sezindiza esigunyazwe uMnyango Wezokuthuthukiswa.
Uma ukhetha umsebenzi ofana ne-Stewardess, kubalulekile ukuba nezinga elihle lesiNgisi. Ngaphandle kwalokho, iningi lezinkampani zendiza zikwazisa kakhulu ukwazi ulimi olungaphezu kolulodwa.
Enye imfuneko uma ufaka isicelo somsebenzi wokuba ngumphathi wukuphumelela uchungechunge lwezivivinyo zokubhukuda. Lezi zivivinyo zihlanganisa ukubhukuda cishe amamitha ayi-100 ngaphansi kwemizuzu emibili nengxenye futhi utshuze ufike kumamitha ayi-8 ukushona.
Izinzuzo kanye nokubi kokuba umphathi
Njengasemisebenzini eminingi, umphathi uzoba nezinzuzo zawo kodwa futhi nochungechunge lokubi okufanele ukukhumbule. Mayelana nezinzuzo, okulandelayo kufanele kugcizelelwe:
Okukhanga kakhulu komsebenzi njengomamukeli ngaphandle kokungabaza ukuthi uhamba ngani kanye nezindawo ezahlukene emhlabeni jikelele ozozivakashela. Uma ungumuntu othanda ukuhamba, umsebenzi womphathi ungcono kakhulu kuwe.
Enye inzuzo ingenxa yokuthi izindiza eziningi, banikeze abasebenzi babo izindiza eziningi zamahhala eziya kwamanye amazwe noma izindiza ngenani elehliswe kwaba elivamile.
Uma ungumuntu onobungane futhi ovulekile, umsebenzi we-hostess Kuzokuvumela amasiko angapheli kanye nabantu abavela kwamanye amazwe.
Emsebenzini womphathi abavame ukuba nawo izinsuku ezimbalwa zokuphumula zilandelana.
Nokho, njenganoma yiluphi uhlobo lomsebenzi futhi Kunenombolo yokuntula kahle okufanele kuphawulwe:
Njengoba sesibonisile ngenhla, umsebenzi wokusiza endizeni udinga ukuthi uhambe ngokuqhubekayo, into engase ingahambisani lapho uphila impilo evamile futhi ukwazi ukuba nomndeni.
Kubalulekile ukukhombisa ukuthi amahora okusebenza we-hostess made kakhulu futhi ahluka njalo. Lokhu kungaholela ezinkingeni ezinkulu ngokuhamba kwesikhathi. ngokulala nokudla.
Kubaluleke kakhulu ukuba namakhono abantu futhi wazi ukuthi ungabhekana kanjani nawo. Izimo ezahlukahlukene zokungakhululeki zivame ukwenzeka ezindizeni okufanele wazi ukuthi uzisingatha kanjani ngaso sonke isikhathi.
Emsebenzini we-hostess kufanele njalo ube nepotimende lakho lokuhamba lipakishwe futhi lilungile. Bangafona ngokushesha futhi kufanele bahambe ngokushesha.
Ngamafuphi, umsebenzi womphathi ukhanga abantu abaningi, njengoba uthola ukuhamba emhlabeni wonke futhi wazi inani elikhulu lamazwe namasiko. Ngakolunye uhlangothi, kufanele kushiwo ukuthi izidingo zabo azinzima kakhulu, njengoba kwenzeka kweminye imisebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Ukuphuma Komsebenzi » Yini okufanele uyifunde ukuze ube yi-stewardess
Ungayithola kanjani imifundaze yasekolishi